Indlela Thola iposi lakho ohlwini Ababhalisele Act Amaphephandaba lakho njalo
Ingabe ukufunda futhi uthathe isinyathelo BONKE imiyalezo zilethwe imeyili lakho lemeyili? Ingabe nawe awuzizwa uthola uphuthelwa omkhulu nokunikezwa kwemikhiqizo kanye nemiyalezo komuntu siqu uma ukumaka imilayezo ye-imeyili ukuze kucis ngaphandle kokuyifunda? Ingabe usomabhizinisi inthanethi usebenzisa i-imeyili yokumaketha njengoba izindlela zakho ezinkulu zokufinyelela nezithameli zakho? Ungakwazi kuzuzwe imiphumela engcono ngokusebenzisa Thumela Pulse.
Zonke inthanethi Abakhangisi sina ukuthumela ama-newsletter. Ngokusebenzisa inqubo-imeyili yokumaketha, osomabhizinisi digital zisebenzisa izincwadi zezindaba njalo ukumaketha ngokwabo kumakhasimende angaba namandla ngaphakathi uhlu lwabo lwamakheli. Ukuthumela izincwadi zezindaba ngezifiso nge-imeyili marketing is indlela eqondile yokufinyelela ukufinyelela ababhalisile bakho. Inkinga Nokho wukuthi ababhalisile kakhulu imeyili musa ukuvula wokumaketha; futhi inthanethi Abakhangisi ungazi isibalo ababhalisile ukuthi ukwenza.
Faka SendPulse. Lena ithuluzi digital lapho ungathola ababhalisile lakho ukuze ufunde futhi isenzo ku-newsletter yakho. Beyond ukuthola uhlu lakho le-imeyili ukuze uphendule ama-newsletter yakho, SendPulse yakhelwe ukuze uqiniseke ukuthi imilayezo yakho ufinyelele kubabukeli obafunayo ngabe bakuphi, ngaso sonke isikhathi, nakanjani. Uma ungafisi ukushiya imali ku amatafula ababhalisile bakho, SendPulse is ithuluzi Kunconywa ukuba kubo ukukhokha wena ngakuyiwashi.
SendPulse yakhiwe ukukhonza yakho nezidingo imeyili yokumaketha ngezindlela ezintathu ezinkulu. Nampa -
Ukwandiswa imeyili sokuchofoza
Kuyinto kakade irekhodi ukuthi uthembele okuqhubekayo imikhankaso imeyili marketing ufinyelele kubabukeli obafunayo. Kodwa SendPulse kukusiza okwengeziwe. Liqinisekisa ukuthi ababhalisile bakho ukuvula ama-imeyili yakho kanye isenzo kunoma i eyengeziwe 50% ukuphumelela rate. Lapho amathuba ababhalisile ephendula izincwadi zezindaba zakho ukwandisa ngo- 50%, ungaqiniseka pre-ukuthengisa ngaphezulu.
Nazi izinzuzo usebenzisa SendPulse yakho imikhankaso imeyili yokumaketha -
50% amathuba anda kokuba ama-imeyili akho avuleke
SendPulse sika Iseva ye-SMTP kuqinisekisa deliverability wakho we-imeyili kungakhathaliseki abamukeli 'ama yezifiso
Intelligence yokufakelwa ukwenza ama-imeyili ophendulayo, ngezibalo kuma-imeyili ovulekile, futhi Semisebenzi ngokuthumela ama-imeyili at izinsuku ethile.
I-Web Push Izaziso
I-Web push saziso inketho ukufinyelela ababhalisile bakho kuwo wonke amadivayisi noma ngabe ungene ngemvume ku-ama-imeyili wabo noma cha. It ikunikeza ukufinyelela uhlu lwamakheli yakho ababhalisile ngaphandle ngempela populating imeyili yabo ibhokisi lokungenayo ngemiyalezo komuntu siqu. Nge web push, ungamazisa ababhalisile kwakho izibuyekezo ezibalulekile ngisho nalapho kungukuthi uxhumeke kwi-inthanethi.
SendPulse isaziso ubuchwepheshe iklanyelwe ukufinyelela ababhalisile ngemiyalezo push kungakhathaliseki kumadivayisi wabo iziphequluli. Injongo oyinhloko ukuze uthole imilayezo yakho yonkana ababhalisile futhi uzithole nokwenza ngokuvumelana naso kungakhathaliseki izimo abazithola bekuzo. izaziso Web push musa overcrowd amabhokisi imeyili, kodwa ababhalisile zithola nabo uthola amanani aqinisekiswe kuchofozwa nge imilayezo yakho komuntu siqu.
Kukhona izinhlelo ezahlukene laphaya ngokuthumela i-SMS ngobuningi, kodwa SendPulse trumps kubo bonke. Ngobuchwepheshe SMS ngobuningi SendPulse sika, ungathumela izinkulungwane imiyalezo komuntu siqu ababhalisile on omakhalekhukhwini. Lapho ababhalisile bakho abakwazi ukungena ngemvume ku-imeyili yabo ukufunda izincwadi zezindaba zakho noma izaziso push, ungathumela kubo SMS ngaphandle nezindaba. Nge okukodwa, ungathumela ngezifiso wombhalo efanayo ezinkulungwaneni ababhalisile bakho futhi babe it zilethwe omakhalekhukhwini ngesikhathi cishe kuyafana futhi okwamanje.
Yini Else Kumelwe Oyaziyo SendPulse?
SendPulse has eziningi ukunikeza inthanethi Abakhangisi namanye amabhizinisi amancane. Ezinye zazo yilezi -
Amandla ngokwezifiso amakhulu izifanekiso-imeyili ukuze uthole izincwadi zezindaba
Semisebenzi ngokuthumela ama-imeyili azinikeza izinsuku ethile
amafomu Ukubhaliswa lokuqoqa ama-imeyili izivakashi zewebhusayithi '
Izibalo ekulinganiseni amazinga we-imeyli evuliwe, link kuchofoziwe kanye indawo ababhalisile
Ukuhlanganiswa Easy ne-CMS futhi ezokuhweba ngekhompuyutha ezisekelweni ezahlukene
Liberty ukuthumela kuze kube 15,000 ama-imeyili ngokwezifiso mahhala ngenyanga
SendPulse lakhiwa kusuka phansi ukuhlangabezana nezidingo zabo bonke imikhakha abakhangisi inthanethi. Kwakuthinta izakhi ngu abakhangisi for abakhangisi, kanye intelligence Iwawo oluhlanganyele yokufakelwa uyakwazi ukuthola ababhalisile ukwenza izenzo abahlosiwe komzamo. SendPulse entsha ithuluzi imali ukwenza ukuthi wonke usomabhizinisi kufanele kusebenze namhlanje nakho ibhizinisi ngcono; bese, kuziwa mahhala zonke ukusebenzisa ngaphandle kwezibopho ezifihliwe.
The Shackles (Poem)
Does Going Abroad Truly Guarantee A Greener Pasture?
Photos News: Grand Opening of “The Eden Before Us” Exhibition in Lagos